Ny gadjets tsara indrindra hahagaga ny mpifankatia anao amin'ny teknolojia | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Fitaovana hafa, SmartWatch
Indray mandeha indray, soa ihany na indrisy, manana valentine manodidina antsika izahay. Daty iray ho an'ny sasany misy heviny manokana ary ho an'ny sasany tsy misy. Ny fahaizan'ny andro iray isan-taona na dia tsy mandeha miaraka aminao aza izy io dia mandeha miaraka amin'ireo magazay lehibe.
Lavitry ny "fitiavana" midika hoe mety hisy ny 14 febroary dia lasa izy fialantsiny lehibe iray hafa homena ary omena fanomezana. Ary amin'ny Androidsis, ahoana no mety hitranga raha tsy izany, hanome torohevitra anao izahay momba ny gadjets tsara indrindra hahafahanao manaitra ny antsasaky ny tsara kokoa.
1 Azo antoka fa voadoka tsara tarehy miaraka amin'ny olon-tianao
1.1 1. Seza misy lalao
1.2 2. Headphones tsy misy tariby
1.3 3. Fehin-tànana bracelet
1.5 5. mpandahateny mahay
2 Ahoana ny hevitrao momba ireo gadjets 5 voalohany ho an'ny Andron'ny mpifankatia?
Azo antoka fa voadoka tsara tarehy miaraka amin'ny olon-tianao
Mba hijanonanao ho olona tena tia ny mpiara-miasa aminao anio Hanoro hevitra anao izahay fa ho anay no mety ho gadjets tsara indrindra amin'ny 2019. Famenon-tsoa ho an'ny finday avo lenta indrindra, fa koa kojakoja isan'andro sy ho an'ny trano. Manantena izahay fa hanampy ary afaka hahomby amin'ity Fetin'ny mpifankatia ity ianao.
Avy eo dia hiantso anao izahay gadjets 5 malaza indrindra ho an'ireo tia teknolojia. Fitaovana ho an'ny findaintsika, ny solosainantsika, na koa ny tranontsika. Miaraka amin'izy ireo dia mora kokoa ny zava-drehetra, tianao ve ny hampifaly ny mpiara-miasa aminao amin'ny Andron'ny mpifankatia? Diniho tsara.
1. Seza misy lalao
Ho an'ireo izay mihevitra ny lalao solosaina na console ho toy ny zavatra ilaina isan'andro. Na ireo izay tsy afaka mandany tontolo andro raha tsy mandeha amin'ny dingana Fornite na ny lalao lamaody mahazatra. Izany dia seza tena ilaina ny seza misy sandry, fa mazava ho azy, tsy ny seza ihany.
Ny indostria manodidina ny videogames dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy izay ankehitriny misy kojakoja ilaina ho an'ny zava-drehetra. Ary ny toerana tena manan-danja indrindra ahazoan'ny mpilalao aina mahazo aina rehefa milalao dia eo amin'izay ipetrahany mihitsy. Ho an'ity tanjona ity, ny seza ho an'ny Gamers.
Tsy seza birao tsotra izy ireo. Ny maodely farany, ankoatry ny ergonomic ary miankina amin'ny kalitao hatsangana, manana fanampiny fanampiny. Ohatra vitsivitsy dia mety ho ny hovitrovitra amin'ny seza, na ny mpandahateny mifangaro ao amin'ny seza mihitsy eo amin'ny haavon'ny loha. Miaraka amin'izy ireo, misy feo manaikitra izay "mampiditra" bebe kokoa ilay mpilalao amin'ny sehatry ny lalao video.
Fa raha mandroso lavitra isika dia misy ny antsoina hoe ny fivoaran'ny seza gamer, ny seza fiandrianan'ny gamer. Avy amin'ny tanan'i Acer no misy ny Acer Predator Thronos. Seza mahazendana mahatalanjona izany mirefy 1,5 metatra ary milanja 220 kg. Ary izany ho fanampin'ny miteny kalitao avo, hovitrovitra mifangaro y zoro fihodinana hatramin'ny 140 degre, mitondra nampidirina efijery 3 misy 27 santimetatra. Pass marina.
2. Headphones tsy misy tariby
Izy ireo dia heverina ho fanampin-javatra tsara indrindra finday avo lenta finday avo lenta. Ny headphones sasany, zavatra izay tsy ananan'ny finday rehetra taona maro lasa izay, dia iray amin'ireo gadjets voalohany novidianay. Ary raha manana isika finday avo lenta vaovao tena azo inoana fa izany aza manisa akory ny fahan'ny mini jack 3.5 mm.
Noho izany dia lasa saika ny headphone tsy misy tariby ilaina mba hihainoana ny mozikantsika. Ny maodely any dia misy karazany maro, ary mitovy ny vidiny. Ny zavatra hitany dia ny mahita ny fifandanjana eo amin'ny kalitao sy ny vidiny, ary ho an'izany eto amin'ny Androidsis nandinika ny sasany tamin'izy ireo izahay, ary na dia fampitahana.
Mijanona fotsiny ny manapa-kevitra raha tadiavintsika izy ireo fehiloha, izay lehibe indrindra ary mirona ihany koa hanana fahaleovan-tena sy kalitaon'ny feo. Na ireo izay mihoatra mifantoka amin'ny hetsika fanatanjahan-tena ary ety ivelany. Ireo dia manana habe kely kokoa, tohana azo antoka kokoa ary koa mahatohitra ny rano.
3. Fehin-tànana bracelet
iray hafa amin'ireo gadjets be mpitady indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ireo brasele de activité. Mediant izay nivoatra be tato ho ato ary ahitantsika fifaninanana masiaka. Teraka toy ny brasele tsotra misy fifandraisana Bluetooth izay nanjary nilaina hampiasa ny finday mba hijerena ireo angona.
Saingy miaraka amin'ireo modely farany, izay saika ny rehetra dia manana efijery, manana tombony bebe kokoa hatrany isika. Dingana fanoherana, fanjifana kaloria, fanaraha-maso torimaso sy fandraisana ara-potoana ny Notifications amin'ny finday avo lenta, izy ireo no kely indrindra mety ho hitantsika amin'ny maodely 100%.
Ny famantaranandro foana iray amin'ireo fanomezana quintessential. Safidy tsara hijerena tsara amin'ny fankalazana rehetra. Fitaovana mahazatra izay toy ny maro hafa no novaina maoderina tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny smartwatch dia ny fivoaran'ny famantaranandro izay tsy milaza amintsika ny fotoana fotsiny.
Ny smartwatch amin'izao fotoana izao dia saika smartphone. Ankoatry ny fananana ireo fiasa rehetra hitantsika amin'ny smartband dia manana maro hafa koa izahay. ny fanaraha-maso ny tahan'ny fo ary ny fampidirana GPS Ataon'izy ireo ho kojakoja mety indrindra ho an'ireo mpankafy fanatanjahan-tena indrindra izany.
Ny maodely manavao indrindra efa ananany mpandahateny ary na dia miaraka amin'ny Karatra SIM tsy miankina amin'ny smartphone. Manohy mitombo ny maodelim-panatanterahana aorian'ny maodely, ary na dia iray amin'ireo gadjets tonga voalohany tamin'ny tsena aza izy ireo dia manohy mivoatra tsy tapaka.
5. mpandahateny mahay
Ireo mpandahateny mahay dia amin'ireo gadjets vaovao indrindra eny an-tsena. Misaotra ny teknolojia novolavolaina tao fandaharana mpanampy amin'ny feo, ireo mpandahateny dia fitaovana ilaina mahaliana. Ao an-trano azo ampiasaina hifehezana ny automatisation an-trano amin'ny alàlan'ny feo, ary mazava ho azy, koa ireo fitaovantsika finday
Ireo mpandahateny mahay dia fitaovana hafa tonga teny an-tsena tamin'ny fomba faran'izay malina izy ireo ary tsy nitabataba firy. Saingy aorian'ny fahitana ny mety ananan'izy ireo dia saika mivoatra na mampivelatra ny azy ny orinasa tsirairay. Ankoatra izay azon'ny mpandahateny atolotra antsika amin'ny alàlan'ny feo na mozika, mahazo tombony lehibe noho ny fifehezana ny feo izay arosony.
Ahoana ny hevitrao momba ireo gadjets 5 voalohany ho an'ny Andron'ny mpifankatia?
Rehefa mandeha ianao dia tsy nijanona nanonona maodely manokana na marika manokana izahay. Ary tsy vitantsika izany satria maro ny safidy ary maro ny mpanamboatra ka tsy hanana toerana hilazana aminao momba azy rehetra izahay. Ny nataonay dia manome anao hevitra tsara ho anao hahomby amin'ny farany miaraka amin'ny fanomezana manokana.
Raha miaraka amin'ny teknolojia, lalao, finday avo lenta, na ny zava-drehetra miaraka ny namanao. Na iza na iza amin'ireo safidy dimy atolotray anao dia ho voadona tokoa. Ary raha tsy manan-javatra homena ianao, na tsy misy olona hividy fanomezana ho anao amin'ny Andron'ny mpifankatia ... tohizo ary omeo ny iray amin'ireo gadjets ireo ny tenanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Gadjet tsara indrindra omena amin'ny Andron'ny mpifankatia
Samsung Galaxy S10 + miaraka amin'ny fitehirizana 1TB dia mety ho tonga aoriana